Ogaden News Agency (ONA) – Turkiga & Maraykanka oo Heshiis Ka Gaadhay Xaalada Mibij.
Turkiga & Maraykanka oo Heshiis Ka Gaadhay Xaalada Mibij.
Posted by ONA Admin	/ June 7, 2018
Maleeshiyaadka Kurdida Siiriya ee loo yaqaan YPG ayaa shaaciyey inay isaga bixi doonaan magaalada Manbij ee bariga dalkaasi Siiriya.
Xoogaga YPG oo gacan ka helaya ciidamada Maraykanka ayaa magaalada Manbij ku sugnaa tan iyo dhamaadkii sanadkii hore, balse Turkiga ayaa ku hanjay inuu duulaan ku qaadi doono magaaladaasi hadii aysan halkaasi isaga bixin maleeshiyaadka Kurdida oo ay u aragto inay khatar ku yihiin amniga wadanka Turkiga.
Magaalada Manbij ayaa laga baqayey inuu dagaal ku dhexmaro ciidamada xulafada ku ah NATO ee Turkiga iyo Maraykanka oo gacan siinaya Kurdida. Ciidamada Turkiga ayaa horey u qabsaday dhulka Afrin ee waqooyiga Siiriya oo ay kurdida ka talinayeen kuna hanjabay inay usii gudbi doonaan Manbij.
Go’aanka YPG uga baxeyso Manbij ayaa la sheegay inuu la xariiro heshiis qorsoon oo dhexmaray Turkiga iyo Maraykanka oo si gaar ah uga wadahadlay xaalada Manbij, xili dalalka isbaheysiga NATO ay isniintii shir ku yeesheen magaalada Washington. Wasiirka Arrimaha Dibada ee Turkiga Mevlut Cavusoglu, ayaa sheegay in 10ka maalmood ee soo socda la fulin doono heshiiska Manbij, isagoo sheegay in hubka laga dhigi doono kooxda Kurdida ee YPG ee ku sugnaa Manbij.
Maraykanka ayaa taageero militari siin jiray Kurdida-Siiriya gaar ahaan kooxda YPG oo ay u adeegsan jireen la dagaalanka ISIS, balse Turkiga ayaa sheegay in kooxdaasi YPG tagay argagaxiso khatar ku ah dalkooda, Turkiga ayaa awood militari kula wareegay in badan oo kamid ah dhulka Kurdida ee waqooyiga Siiriya iyagoo sidoo kale adeegsanaya maleeshiyaadka Siiriya ee dhulkaasi kasoo jeeda oo ay ku jiraan kuwa Carabta sunnida.